Midziyo - Fujian Shengyang Mapaipi Technology Co, Ltd.
Yepamberi yekugadzira mutsara
Iyo nyowani nyowani yekugadzira mutsetse inogamuchirwa naShengyang Technology inokodzera kuburitswa kweakasiyana polyolefin mapaipi. Iyo yekugadzira tambo ine yakakwira degree of otomatiki, yakatsiga uye yakavimbika kugadzirwa, uye inogona kupa yemukati neyekunze dura rinoumbwa uye multilayer rinoumba rinoumba pombi extrusion kune hombe dhayamita mapaipi.
Shengyang Technology ine yepamusoro jekiseni kuumbwa muchina neakajeka maitiro ekudzora, yakakwira kuburitsa uye yakatsiga mhando. Iyo yakazara seti yekufananidza pombi yakakodzera mafuru inowanika kune vatengi.
Yakanyatsoita multi-angle angle yekushandisa michina inopedza yakakura-dhayamita inoenderana pombi fittings.
Strict mhando kuongorora
Shengyang Technology anonyatso kuomesa iyo ISO9001: 2008 yemhando manejimendi sisitimu uye inonamira kukoshesa kugadzirisa maitiro. Kuti uve nechokwadi chekutanga kwakatangira, kwakakwirira zviyero, iyo yekuyedza nzvimbo ine akashongedzwa akazara ekuyedza uye yekuyedza michina. Kubva pane zvakasikwa zvigadzirwa kusvika pakupedzwa zvigadzirwa, kuongororwa kwakasimba kunoitwa maawa masere ese. Kuedzwa kwesando yekukanganisa bvunzo uye kuyedza kweVicat. Idzi bvunzo dzinoona kuti tinoshandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye kugadzira zvigadzirwa zvinoenderana nematanho. Zvigadzirwa zve "Shengyang" zvinonyatso kuzivikanwa nematanho ekugadzira uye nemazuva ekugadzira, kuitira kuti mhando yechigadzirwa igone kuongororwa uye kuteverwe.